သောသီခို: မြ၀တီမြို့တွင် ဒီကေဘီအေနှင့် ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ဆန္ဒပြ
မြ၀တီမြို့တွင် ဒီကေဘီအေနှင့် ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ ဆန္ဒပြ
ဒီဇင်ဘာလ ၁၃ရက်။ ၂၀၁၂ခုနှစ်။ (ကရင်ကျောင်းသားများကွန်ယက်)
ကရင်ပြည်နယ်၊ မြ၀တီမြို့တွင် တိုးတက်သောဗုဒ္ဓဘာသာ ကရင်အမျိုးသားတပ်မတော်-DKBAနှင့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီ KNU/KNLA-PC တပ်ဖွဲ့ဝင်တို့ပူးပေါင်းပြီး လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီ စီမံကိန်း သပိတ်စခန်း အကြမ်းဖက်ဖြိုးခွဲမှုနှင့် ကချင်ပြည်နယ် ထိုးစစ်ဆင်မှုများ ရပ်တန့်ရန် ရည်ရွယ်ပြီး ယနေ့နံနက်အစောပိုင်းတွင် ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
ကလို့ထူးဘော ဒီကေဘီအေဘက်မှ ဗိုလ်မှူးစန်းအောင်နှင့် ကရင်ငြိမ်းချမ်းရေးကောင်စီဘက်မှ ဗိုလ်တိုက်ကားတို့ ဦးဆောင်၍ စစ်ယူနီဖောင်းအပြည့်အစုံဖြင့် တပ်ဆင်ထားသော တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အား ၁၀၀ခန့်သည် ကား ၁၀စီးကျော်နှင့်အတူ ပိုစတာများကိုင်ဆောင်၍ ယနေ့ နံနက် ၇နာရီကျော်တွင် စတင် ဆန္ဒပြကြခြင်းဖြစ်သည်။
မြ၀တီမြို့ခံတစ်ဦးက “ဒီနေ့ မနက် ၇နာရီကျော်မှာ ဘုရင့်နောင်ဈေးလမ်းမကြီးအတိုင်း ချစ်ကြည်ရေးတံတားထိပ်ကို ပိုစတာတွေကိုင်ဆောင်ပြီးတော့ ချီတက်ကြတယ်။ ပြီးတော့ ကြခတ်တောရ ကျောင်းလမ်းမကြီးအတိုင်းပြန် ကွေ့ပြီးတော့ ၈နာရီ ခွဲကျော်မှာ ဆုံဆည်းမြိုင်ဘက်ကို ပြန်တက်သွားတယ်”ဟု ပြောသည်။
အဆိုပါ ဆန္ဒပြပွဲတွင် လက်ပံတောင်း တောင်ကြေးနီစီမံကိန်း ချက်ချင်းရပ်၊ သာသနာအန္တရာယ်ကို ကာကွယ်၊ သံဃာတော်များကို မီးရှို့သူကို ချက်ချင်းအရေးယူပေးပါ၊ ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ထိုးစစ်များကို ချက်ချင်းရပ်ပေးပါ၊ သံဃာတော်နှင့် ပြည်သူလူထုတောင်းဆိုချက်များကို လိုက်လျောပေးပါ အပါအ၀င် ကြေးနီစီမံကိန်း သပိတ်စခန်း ဖြိုခွဲမှုတွင် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည့် သံဃာတော်များ၏ ဓါတ်ပုံ ပိုစတာများကို ကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဦးဆောင်သူ ဗိုလ်မှူးစန်းအောင်က “စစ်မဖြစ်ချင်လို့ပါ။ လမ်းလျှောက်ပြီး ဆန္ဒတွေ ဖော်ပြတယ်။ စစ်ဖြစ်ရင် နိုင်ငံတော်လည်း နစ်နာတယ်။ ပြည်သူတွေလည်း နစ်နာတယ်။ စစ်ဖြစ်ချင်ရင် ကျနော်တို့ လမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြစရာမလိုဘူး။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့ ဒီလို တောင်းဆိုဆန္ဒပြရတာဖြစ်ပါတယ်။”ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ဆန္ဒပြပွဲတွင် မြ၀တီမြို့ သတင်းတပ်ဖွဲ့မှ မှတ်တမ်း ဓါတ်ပုံ ရယူမှုများရှိသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များဘက်မှ တားဆီး ပိတ်ပင်မှုများ တစုံတရာလုပ်ဆောင်ခြင်း မရှိပေ။
ထို့အပြင် ကော့ကရိတ်မြို့တွင်လည်း ယနေ့ သို့မဟုတ် မနက်ဖြန်တွင် အလားတူ တောင်းဆိုဆန္ဒပြမှုများ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန်အစီအစဉ်ရှိသေးသည်ဟု ၎င်းဆန္ဒပြအဖွဲ့က ပြောသည်။
ပြီးခဲ့သည့် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ရက်နေ့ မနက် ၃နာရီအချိန်တွင် စစ်ကိုင်းတိုင်း၊ မုံရွာမြို့နယ်၊ လက်ပံတောင်း
တောင်ကြေးနီ စီမံကိန်းရပ်တန့်စေရန် သံဃာတော်နှင့် လူထုများ သပိတ်စခန်း
ဖွင့်ပြီး ဆန္ဒပြမှုတွင် အစိုးရ ရဲတပ် ဖွဲ့မှ ၀င်ရောက် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွဲမှုကြောင့်
သံဃာတော် ၇၀ပါးနှင့် ပြည်သူ ၅ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။
Posted by ဇင်ယော် at 4:47 AM
GOODBYE 2012.... HAPPY NEW YEAR 2013
Happy New Year 2013 Greeting
KIA လဂျားယန်ကို မြန်မာလေတပ် ဆက်လက်တိုက်ခိုက်
သမိုင်းတရားခံ ဖြစ်မယ်၊ မဖြစ်ဘူးဆိုတာ ပြည်သူက ဆုံြး...
၂၀၀၈ ဖွှဲ့စည်းပုံနဲ့ ဦးပိုင်ကို အသုဘချ (ရုပ်သံ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ဦးဆောင်မှုအား ပြည်တွင်းငြိမ်းခ...
ဗမာ့တပ်မတော်လက်ချက် ကချင်ရွာသားများ လက်နက်ကြီးထိမှ...
Battle 28-12-2012-KIA-Burma Jet Fighter drop bomb ...
KIA + ABSDF (ကချင်ပြည်စစ်မျက်နှာ အပိုင်း ၄-၅)
With Pragmatists in Control, What’s Next for the K...
KNU ငြိမ်းချမ်းရေး ဆွေးနွေးရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ြ...
ဘွဲကရင် လေမှုတ်တူရိယာအဖွဲ့ အကြောင်း
(၁၅) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ ကရင်အမျိူးသားအစည်းအရုံးည...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း ဦးသိန်းစိန်အစိုးရမှ ပြင်းထန်စွ...
VOA ရဲ့ ခရစ်စမတ်အထူးအစီအစဉ် (၂၆၊ ၁၂၊ ၂၀၁၂)
‘Poison Laptops’ Distributed by Govt Peace Team? "...
ဗိုလ်မှူးချုပ်ဂျော်နီကို ကေအဲန် အယ်လ်အေ စစ်ဦးစီးချ...
ဒေါနမြေ၊ ပန်းရဲ့လမ်း၊ ငုံနေတဲ့ မနက်ခင်း
Christmas Eve in Burma
KIA + ABSDF(ကချင်ပြည်နယ်စစ်မျက်နှာ အပိုင်း ၂ + ၃)
အပူမီးတွေငြိမ်းစေဖို့(ခရစ်စမတ်တေးလက်ဆောင်)
ကရင်ဒေသ ဘိလပ်မြေစက်ရုံ စီမံကိန်း ရွာ ၂၀ ခန့် ပြောင...
"ခေါင်းစဉ်မဲ့ ခေါင်းစဉ်" (ဆရာချစ်ဦးညို - စာပေဟော...
KNU delegates vote-in five new leaders
KNU ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ဗိုလ်ချူပ်ကြီး မူတူးစေးဖိုးကို ရွေးခ...
KNU ၏ လတ်တလောအခြေအနေအပေါ် ပဒိုဇော်နောင်နှင့်ဆက်သွယ်...
"ပဒိုမန်းရှာပြောသော သတိထားစရာ ၀ဲရောဂါ"
သူသေသွားပြီ သူ့ မိန်းမ မုဆိုးမဘ၀နဲ့ ကျန်ရစ်ရှာ
I am so proud of I'm Karen (တီးနို)
သောက်ရေခပ် ရေအားလျှပ်စီမံ ကိန်းကြောင့် ဒေသခံများ၏ ...
ကေအိုင်အေ စခန်းအား ထိုးစစ် စင်နေခြင်းနှင့် ပတ်သက်ြ...
KIA၏ မဟာဗျူဟာမြောက် နိုင်ငံရေးတိုက်ပွဲကြီးများ
KIA နှင့် အစိုးရတပ်တို့၏ နှစ်ဖက်တိုက်ပွဲ လက်နက်ကြီ...
DKBA protest against crackdown of copper mine stri...
တိုင်းရင်းသားလူနည်းစုသုတေသနအဖွဲ့ ရဲ့ စစ်ရေးသုံးသပ်...
KIA နှင့် ABSDF ပူးပေါင်းတပ် ဗမာ့တပ်မတော်ကိုတွန်းလ...
KIO ဌာနချုပ် အနီး တိုက်ပွဲတွင် အစိုးရတပ် စစ်ရဟတ်ယာ...
မြ၀တီမြို့တွင် ဒီကေဘီအေနှင့် ကရင် ငြိမ်းချမ်းရေးကေ...
ကော့ကရိတ်မြို့နယ်၊ အူကလေး ထာ့ရွာသို့ အစိုးရစစ်တပ် ...
လက်ပံတောင်းအကြမ်းဖက်မှု တောင်းပန်ဖို့ သံဃာထုတောင်းဆ...
ဒေါက်တာဇာနည်နဲ့မော်ကွန်း မဂ္ဂဇင်း အင်တာဗျူး
ယခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ...
Daw Aung San Suu Kyi's Speech in Nat Mouk
ဘုရားသုံးစူမြို့အမှတ်(၂)ရပ်ကွက်တွင် အသတ်ခံရသော ဥ...
(၁၅)ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ ညီလာခံသို့ ပေးပို့ သော အြ...
RFA Burmese TV December 7, 2012
ကချင်မလေး - လားရှိုးသိန်းအောင်
ကြမ္မာဆိုး နဲ့ တိုင်းရင်းသား
KNPP ဖွံ့ဖြိုးရေးကော်မတီရုံး ဖွင့်ပွဲကျင်းပ
HAPPY BIRTHDAY to D.R Cynthia Mg
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်း အထွေထွေသပိတ်စခန်း...
လက်ပန်းတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်အရေးအခင်း (ရုပ်သံ)
တိုင်းရင်းသားအရေးအတွက် လေ့လာဖတ်ရှုသင့်သော စာစုစာရင်...